CPF (MonCompteFormation) ဖြင့်ရန်ပုံငွေသင်တန်းကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းသည်ဤကိစ္စအတွက်အလွန်လွယ်ကူလိမ့်မည် လုံးဝအခမဲ့လေ့ကျင့်ရေး။ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ ၎င်းကိုရန်ပုံငွေမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
p ဖြင့် CPF ငွေကြေးထောက်ပံ့နည်းOle အလုပ်အကိုင်။
တိုတိုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်သင်တန်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်အတိအကျသိလိမ့်မည်။ အလုပ်လုပ်သူသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သူတိုင်းသည်လေ့ကျင့်ရေးဘတ်ဂျက်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည် အလိုအလျှောက် site ပေါ်တွင်ငါ့လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်အကြွေး, qui est une initiative de l’état. Vous y trouverez les meilleures formations de qualité. Si vous avez déjà travaillé, alors vous…
CPF - ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်ရေးအကောင့် - သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပါ ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မသင်မနေရမျက်နှာဖုံး ... ခြွင်းချက်အချို့
လွန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာ: တစ် ဦး ကျမ်းကိုးစာရင်းတည်ဆောက်ခြင်း
အောက်ပါစုပေါင်းသဘောတူညီချက်များ - ရပ်စဲရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောရပ်စဲခြင်းအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
မဖြစ်မနေပြသရန် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများသည်အဘယ်နည်း။